Madaxweynaha Barcelona oo ka hadlay guuldarradii kooxdiisa ka soo gaartay kulankii xalay ee El Clásico – Gool FM
Madaxweynaha Barcelona oo ka hadlay guuldarradii kooxdiisa ka soo gaartay kulankii xalay ee El Clásico
Dajiye March 2, 2020
(Barcelona) 02 Mar 2020. Madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa xaqiijiyay inaysan wax dhibaato ah ka soo gaarin kooxdiisa guuldarradii ay kala kulmeen kulankii El Clásico ee Real Madrid.
Real Madrid ayaa dib ugu soo laabatay hoggaaminta horyaalka La Liga kaddib markii ay guul muhiim ah kaga gaartay kooxda Barcelona 2-0, kulankii El Clásico oo qeyb ka ahaa kulamadii 26-aad horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi kooban uu ku bixiyay warbaahinta Josep Maria Bartomeu waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Ma jirto wax dhibaato ah ee naga soo gaartay guuldarradii El Clásico”.
“Xilli ciyaareedkii horyaalka weli waa uu dheer yahay”.
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa dib ugu soo laabtay maanta oo isniin ah tababarka, iyaga oo kulankooda soo aadan ay ku wajihi doonaan naadiga Real Sociedad garoonka Camp Nou Sabtida soo socota.
Rio Ferdinand oo shaaca ka qaaday sirta ka dambeysa horumarka ay sameysay Man United dhawaantan
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Portsmouth iyo Arsenal ee koobka FA Cup-ka oo la shaaciyay